तपाईं परमेश्वरको उपहार थियो भने | Apg29
आज परमेश्वर र जीवन उहाँ प्रस्ताव बारे कुल अ&#
के तपाईं येशू आफ्नो भरोसा गर्दा, तपाईं परमेश्वरको सन्तान हुनेछ। परमेश्वरको आत्मा तपाईंको मनमा ड्र र तपाईं परमेश्वरको प्रेम भरिएका हुन्छन्। येशूले जिउँदो पानी संग तुलना।
येशूले पानी राम्रो मा बसे, र एक महिला संग कुरा।
"येशूले जवाफ दिनुभयो र तिनलाई भन्नुभयो: तपाईं परमेश्वरको उपहार र जो यो, पिउन मलाई दिनुहोस् 'तपाईं उहाँलाई सोधे थियो, र उहाँले तपाईं जिउँदो पानी दिइएको थियो तिमीलाई कि भन्नुभयो छ थाह भने।" Jn। 4:10
आज परमेश्वर र जीवन उहाँ प्रस्ताव बारे कुल अज्ञानता मा प्रत्यक्ष धेरै मानिसहरू। त्यसपछि जो लाग्छ उनि के यो लगभग बारेमा थाहा ती छन्, तर अलग उत्पादित भ्रम छ।
के तपाईं बाइबल बारी गर्न आवश्यक हरेक व्यक्ति परमेश्वरको प्रस्ताव पत्ता लगाउन। जब बाइबल, तपाईं हुनेछ दुर्भाग्य धेरै "नीरस र अनिच्छुक पुस्तक" जस्तै भावना भन्छन्। यो हुनत एक भ्रम छ।
त्यसपछि बारेमा यो के हो?
परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको पुत्र हामीलाई प्रकट गरिएको छ, येशू क्रूसमा हाम्रो पाप दण्ड लिनुभयो। परमेश्वरले पहल गरे र हामीलाई पापको क्षमा प्रदान। हामी सफा अन्तस्करण हुन सक्छ। हामीले येशूको विश्वास गर्न छनौट गर्दा हामीलाई प्रेम पुष्टि गर्न चाहन्छ।
येशूले साधारण पानी चाहनुभएको कि विचार संग कुरा जसलाई महिला। त्यो परमेश्वरको पनि उपहार र जो यो उनको त्यो कुरा थियो थिएन।
बाइबलमा शब्दहरू मानिसहरूले लेखिएका छन्, तर तिनीहरू परमेश्वरको प्रेरणा छन् शब्दहरू हुन्। महिला सुरुमा छैन, तर पछि, उसलाई जो कुरा भएको थियो। के तपाईं बाइबल भाग लिन गर्दा बुझ्न तपाईं परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीका शब्द को भाग लिन जब कि। र यो मामला मा प्रस्ताव तपाईं भित्र स्रोत हुन सक्छ भन्ने छ। राम्रो र कहिल्यै नगर्ने स्रोत ड्राई चल्छ। त्यसपछि तपाईं यहाँ र अधिक त्यहाँ भन्दा हेर्न छैन। तपाईं त तपाईं भित्र जीवनको उपहार छ। परमेश्वरको आत्मा तपाईं बास गर्न चाहन्छ। उहाँले तपाईं मसीही जीवन बिताउन मदत गर्न चाहनुहुन्छ। यो अद्भुत छ। जीवन, शान्ति, प्रेम र आनन्द को एक उपहार। के येशूले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको हामीलाई लागि गरेको कारणले सबै। यो मेरो मित्र, यो संसार भङ्ग इनार outclasses। तपाईं परमेश्वरको उपहार स्वाद प्राप्त गर्दा पाप यसको अपील हराउछ।
परमेश्वरको उपहार कसरी प्राप्त गर्ने?
"... त तपाईं उसलाई, 'आग्रह थियो - बिस्तर र येशू जिउँदो पानी
"... र उहाँले तपाईं जिउँदो पानी दिइएको थियो।" - येशूले जब तपाईं उसलाई सोध्न, जीवन तपाईं दिन्छ।
तपाईं बिल्कुल सबै बुझ्न छैन, तर तपाईं सुरक्षित परमेश्वरले मात्र राम्रो उपहार दिन्छ भनेर थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। आज पानी जीवित ध्यान। यो तपाईं purifies र नयाँ शक्ति र जीवन दिन्छ। बाइबल खोल्न र येशूको रोमाञ्चक जीवन थप पढ्नुहोस्।
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष